Abanye abavelisi | KwiChina Abanye abaFektri kunye nabaxhasi
Dimple Tshixa iBump Gun
I-Dimple Lock Bump Gun (aka. I-Dimple Pin Bump Key Gun Set) ibandakanya i-10 blade jikelele kwimilinganiselo yezona iisilinda zepinki zisisiseko kunye nomgca omnye wezikhonkwane ngasekunene okanye ngasekhohlo. Amandla afanelekileyo amaqhuma kunye nomgama ofanelekileyo wokuhamba kwentsimbi unokulungiswa. Inkqubo yesitshixo esiphumeleleyo sixhomekeke kwizinto ezininzi. Ke ngoko kuyimfuneko ukwenza uhlobo lwenkqonkqozwa ngokomlinganiso ohlukaniswe kakuhle. Oko kubizwa ngokuba yiBump Key Technology kwenza wonke umntu avule ...
I-H & H 10 Khetha i-Lock ye-Lock
I-H & H 10 I-Dimple Lock Pick Set iquka iindlela ezili-10 zokukhetha ezahlukeneyo ze-2 ezahlukeneyo, zibandakanyiwe zizixhobo ezibini zoxinzelelo. Izibambo zokukhetha zenziwe ngeplastiki eluhlaza, entle kwaye inzima, kwaye kwisiphatho ngasinye sokukhetha i-1-10 yeenjongo zokuchonga ngokulula. Okubandakanyiweyo: Iitayile ezili-10 ezahlukeneyo zokukhetha ubungakanani obuhlukeneyo obu-2. Izixhobo zoxinzelelo ezi-2 Ziza zibonelelwa ngecala elimnandi leqokobhe leH & H, uphawu lomgangatho ophezulu! Inkqubo yoku-odola Bhalisa iakhawunti nge-imeyile yakho - Log ...
I-HUK Red Tiger Lock ikhethwe
I-HUK Red Tiger Lock Picks iseti ebalaseleyo yokukhetha iinjongo zokutshixa ngokubanzi, ukhetho ngalunye lokutshixa lunombambo wokubamba ophakamileyo kuluhlu olubanzi lwezicelo. Olu seto lokukhetha luqukethe ii-hook picks, i-dimple picks, i-pick picks, i-extractor key extractors kunye ne-tension wrenches. I-HUK Red Tiger ibonelela ngokukhetha okwenziwe kakuhle kunye nokuchongwa okukhethiweyo kuwo onke amanqanaba okukwazi ukukhiya ngokukhiya. Ukuba neendidi ezahlukeneyo kuseto olunye kwenza oku kube siseti efanelekileyo yenjongo jikelele. Inkqubo yoku-odola Bhalisa iakhawunti nge-imeyile yakho ...
I-GOSO 7 Pin Tubular Lock Pick (7.0mm, 7.5mm, 7.8mm)
I-GOSO 7 Pin Tubular Lock Pick iza neziqwenga ezi-3 ezilinganisa ubungakanani obahlukileyo ozibona phaya endle. Ukhetho ngalunye luhlengahlengiswa ngokupheleleyo ukuze wenze kuyo nayiphi na inzulu oyifunayo. Oku kubaluleke ngakumbi kuba amaxesha ngamaxesha abavelisi abohlukeneyo baya kusebenzisa izitshixo ezinzulu okanye ezingacacanga kuxhomekeke kumatshini. Ubungakanani obuthathu bokusetwa kuza kunye no-7mm, 7.5mm, kunye no-7.8mm. Siyakwazi ukukhetha uninzi lwezitshixo ezihamba ngaphakathi kwimizuzwana engama-30. Ukubeka le tubul ...